QM oo cambaaraysay weerarkii Shaqaale ka tirsanaa Hay’adda UNHCR ee lagu dilay Muqdisho. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
QM oo cambaaraysay weerarkii Shaqaale ka tirsanaa Hay’adda UNHCR ee lagu dilay Muqdisho.
Hadal ka soo baxay Hay’adda QM ugu qaabilsan Arrimaha Qaxootiga ee UNHCR ayaa lagu sheegay inay Kooxo hubeysan oo aan la aqoonin inay shalay Haweeney Shaqaale ka ah Hay’adda UNHCR iyo Dareewalkeeda ku dileen magaalladad Muqdisho.
War qoraal oo uu soo saaray Madaxda Hay’adda UNHCR, Antonio Guterres ayaa lagu sheegay inay aad ugu xun yihiin dilka Shaqaalahooda oo la oran jirey Marxuumad Amino Nuur Maxamed.
Waxa uu intaasi ku daray inuu dilkaasi muujinayo Khatarta ay Shaqaalaha UNHCR kala kulmi karaan Hawl-maalmeedkeeda.
Shaqaalaha Hay’adda UNHCR ee ku sugan Xarunta Dhex ee Hay’addaasi ku leedahay magaalladda Geneva ee dalka Switzerland ayaa lagu wadaa inay maanta muddo Hal daqiiqo ah oo aamusnaan ah ugu baroor-diiqi doonaa Marxumadaasi.
Allaha U Naxariistee Marxuumad Amina Nuur Mohamed waxay tan iyo sannadkii 2011-kii ka shaqeyn jirtey magaalladda Muqdisho, waxayna ifka kaga tegtay labo carruur oo uu mid ka mid ah uu dhashay 3 bilood ka hor.
Dhinaca kale, Sannadkan oo keliya 5 Shaqaale oo ka tirsan Hay’addaha QM ayaa lagu dilay Somalia, iyadoo bishii April Shaqaale ka tirsan Hay’adda QM ugu qaabilsan Xannaanadda Carruurta ee UNICEF qarax lala eegtay magaalladda Garowe ee Puntland.
Alshabaab oo qarax ku dhaawacday Saraakiil ka tirsan Boliska Kenya
34 Dowladood oo ay Somalia ku jirto oo ku dhawaaqay Isbahaysi Milliteri oo ka dhan ah Argagixisadda.